मलेसियासँगको श्रम सम्झौतामा व्यवसायी असन्तुष्ट, 'न्युनतम कामदारको सङ्ख्या कति ?'
Tue, Jun 2, 2020 at 7:36am
मलेसियाले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने बारे स्पष्ट पार्न सकेको छैन
काठमाडौं, १५ कात्तिक
सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सहज हुने अनुमान गरिएको छ । सम्झौता सार्वजनिक हुन नसक्दा अन्योल पनि कायमै छ । सम्झौताका शारंशले कतिपय विषयलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको असन्तुष्टि पनि कायमै छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि गत सोमबार खुशी ल्याएको धेरैको बुझाई रह्यो । केही विषयमा स्पष्टता नहुदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने वा नहुने चिन्ता पनि कायमै राखेको छ । मलेसियाले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने बारे स्पष्ट पार्न सकेको छैन । न्युनतम कति कामदार नेपालबाट लान सकिन्छ. ?
यो स्पष्ट छैन । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य विमाका विषयमा समेत खुलाइएको छैन । यद्धपि कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट पाउँदै आएको समस्या हट्ने विश्वास लिन सकिन्छ । पहिले एक लाखदेखि २ लाखसम्म एउटा कामदारबाट रकम असुल्ने व्यवसायीले सम्झौतापछि एक महिनाको तलबको ५० प्रतिशत रकम लिन पाउँनेछन् । अर्थात मलेसियन मुद्राको दर अनुसार न्युनतम तलब २८ हजार ४ सय रुपैयाँको ५० प्रतिशत १४ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र व्यवसायीले पाउँछन् । यो रकमले कामदार पठाउन नसकिने व्यवसायीको भनाई छ ।
यस कारण पनि उनीहरुको असन्तुष्टि देखिएको मान्न सकिन्छ । यता श्रम विभाग व्यवसायी र कामदारको पक्षमा काम गर्ने भएकाले सम्झौताले दुबै पक्षलाई समेटेको बताउँछ ।
बैधानिकरुपमा १० हजारको विल थमाएर कामदारबाट लाखौँ रुपैँया असुल्दै आएका व्यवसायीलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ ।